Wararka ka imanaya magaalada Garoowe ayaa sheegaya in baarlamaanka Puntland ay maanta u codeeyeen diidmada tallaabadii aqalka hoose ee baarlamaanka federaalku uu muddo kordhinta ugu sameeyey laamaha dawladda federaalka.
Fadhi uu maanta yeeshay baarlamaanka Puntland waxaa soo xaadirey 52 xildhibaan kuwaasi oo 49 ka mid ah ay u codeeyeen diidamada sharciga muddo kordhinta ee baarlamanaka federaalka.
Bogga tweeterka ee baarlamaanka Puntland ayaa lagu qoray in xubin ka mid ah baarlamaanka uu ka horyimid mooshinka lagu diidayey go’aanka baarlamaanka, laba kalena ay ka aamuseen.
Ka hor codka ay qaadeen baarlamaanka Puntland ayaa waxaa horyimid oo warbixin siiyey madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo toddobaadkii hore ka laabtay Muqdisho kadib markii baarlamaanka federaalku ay muddo kordhinta sameeyeen.
Dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madobe) ayaa isna ka horyimid go’aanka baaramaanka federaalka oo uu ku tilmaamay sharci-darro. Isagoo hadlayey habeenkii xalay ahaa ayuu sheegay in Aqalka Hoose keliya uusan sharciyad u haysanin tallaabadaas oo kale mar haddii ay horey wadajir u wada ansixiyeen labada Aqal ee Baarlamaanka heshiiskii 17-ka Sebtember.
Madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagu horey usoo dhoweeyey go’aanka baarlamaanka federaalka, waxaana uu sheegay inay dawladdu ka shaqayn doonto sidii loo fulin lahaa.